किन मनाइन्छ ‘भ्यालेन्टाइन्स् डे’ अर्थात प्रेम दिवस?
आज फेब्रुअरी १४ अर्थात भ्योलेन्टाइन्स् डे। विश्वभर आजको दिनलाई प्रेव दिवसको रुपमा मनाइन्छ। पछिल्लो समय नेपालमा पनि यसको राम्रो प्रभाव परेको छ। ‘प्रेमिल’ जोडीहरुको यो पर्व किन मनाउन शुरु गरियो? यसबारे यहाँ चर्चा गरौं।
भ्योलेन्टाइन्स् डे पादरी सेन्ट भ्यालेन्टाइनको सहादतसँग सम्बन्धित छ। तत्कालीन रोमन सम्राट् क्लाउडियस द्वितीयले युवा प्रेम र विवाहतिर लागे सैनिक सेवा प्रभावित हुन्छन् भन्ने ठानेर यसलाई प्रतिबन्ध लगाएका थिए। तर, भ्यालेन्टाइन भने सम्राट्को निर्णयलाई धर्मविरुद्ध भन्थे।
उनी अनुशासनको दायराभित्र हुने प्रेम र आकर्षणमा ईश्वर पनि खुसी हुन्छन् भन्थे। त्यसैले उनले राजाको आदेश अवज्ञा गर्दै प्रेम र विवाहका लागि प्रेरित मात्र गरे। त्यतिमात्र हैन उनले युवायुवतीका जोडीहरू तयार पारी सार्वजनिक स्थलमै सामूहिक विवाह नै गरिदिए।
त्यसपछि उनीसँग रुष्ट बनेका शासकले निषेधाज्ञा तोडेको आरोपमा उनलाई ई.पू. २७० को फेब्रअरी १४ मा मृत्युदण्ड दिए। प्रेमका लागि प्राण त्यागेका उनै पादरीको सम्झनामा भ्यालेन्टाइन डे मनाउन थालिएको हो। विश्वभरि नै यस दिनलाई उत्सवको रूपमा मनाउने गरिन्छ।
प्रेम दिवसलाई युवायुवतीहरु विभिन्न कार्यक्रम गरी रमाइलो गरेर मनाउँछन्। आजको दिन आफूलाई मन परेको मान्छेसँग प्रेम प्रस्ताव राख्ने चलन पनि छ। रातो गुलाफ प्रेम र मनोभावनाको प्रतीक हो। भ्यालेन्टाइन डे मा सबैभन्दा धेरै रातो रङको गुलाफ आदानप्रदान हुन्छ। यसलाई प्रेम प्रस्तावका रूपमा प्रदान गरिन्छ।
#प्रेम_दिवस #भ्योलेन्टाइन्स्_डे #पादरी_सेन्ट_भ्यालेन्टाइन
प्रकाशित मिति: आइतबार, फागुन २, २०७७ ११:०३